Momba anay - Xinxiang Zhengyuan Purification Technology Co., Ltd.
Xinxiang Zhengyuan Science Purification Science and Technology Co, Ltd dia orinasa avo lenta amin'ny teknolojia avo lenta miaraka amin'ny fahazoan-dàlana fananganana varotra fananganana 1st sy 2nd-2nd, ary mandray anjara amin'ny fikarohana sy famokarana fitaovana fanivanana metaly avo lenta, vokatra filtration / rafitra ， fanaka fanerena, toham-baravarana, tilikambo ary fitaovana hafa efa namboarina manokana.
Zhenyuan dia mahafeno ny fepetra ho an'ny ISO9001: 2008 Management Management System, ny ISO14001: 2015 ny Rafitra Eanagement System momba ny tontolo iainana, ary ny OHSAS18001: 2007. Zhengyuan dia mpikambana ao amin'ny komity "Komitim-pirenena ara-teknika ho an'ny fizarazarana madiodrafitra sy fanodinana screening" (SAC / TC168) ary "Komitim-pirenena ara-teknika ho an'ny fananganana milina fisarahana" (SAC / TC92). Ny marika famantarana azy, "ZYstar", dia lasa marika malaza eo amin'ny orinasa.
Zhengyuan dia nanorina fiaraha-miasa naharitra amina oniversite sy andrim-pikarohana siantifika maro. Nivory vondrona manampahaizana momba ny filtrasiana matihanina, zokiolona R&D ary injeniera fampiharana ary elité teknika hafa, manampahaizana manokana amin'ny R&D ny fitaovam-pamokarana famokarana angovo sy ny fikarohana maoderina sy fampiharana ny teknolojia fanadiovana, ary manome fanohanana teknolojia manodin-tsofina ho an'ny vokatra famolavolana sy fanamboarana.
Zhengyuan dia nanokana efitrano fanadiovana sy efitrano fiasa miaraka amin'ny fitaovana arak'asa ary ny fomba fanaraha-maso, izay mahay mandrindra ny fandrefesana ny sivana sy ny fahadiovan'ny tsiranoka, ny fandalinana fandotoana ary ny fitiliana fampisehoana ho an'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany, manome antoka azo antoka ho an'ny trano vokatra. Miaraka amin'ny heriny ara-teknika mahery vaika, ny fitaovana famokarana mandroso, ny fomba famitana tsara sy tonga lafatra ary ny rafitra fanamafisana ary ny rafitra fanamafisana ny kalitao dia miezaka i Zhengyuan hanome vokatra mafy sy mahomby ary vahaolana manara-penitra ho an'ny mpanjifany.